कञ्चनपुरका मनमोहक लिंगा र बेदकोट ताल [यात्रा संस्मरण] - Everest Dainik - News from Nepal
कञ्चनपुरका मनमोहक लिंगा र बेदकोट ताल [यात्रा संस्मरण]
सन्तोष रोकाया, कैलाली । सुदूरपश्चिमको एक महत्वपूर्ण पर्यटकिय गन्तब्यको रुपमा कञ्चनपुरलाई पनि लिइन्छ । करिब २÷३ दर्जन पर्यटकिय स्थल भएको कञ्चनपुरका बेदकोट ताल, झिलमिला ताल, पछिल्लो समयता प्रख्यात रहेको प्रसिद्ध शिबलिङ्गेश्वर धाम र दक्षिण एसियाकै लामो दोधारा झोलुङ्गे पुलले पनि कञ्चनपुर मात्र नभएर सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
देश संघिय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै यी पर्यटकिय स्थलहरुको भौतिक बिकासका गतिबिधीहरु पनि दिन प्रति दिन बढ्दै गएका छन् । यिनै प्रख्यात र प्रसिद्ध पर्यटकिय स्थलहरुको अवलोकन तथा रिपोर्टिङ्गको लागि हाम्रो टिम कार्तिक २९ गते धनगढीबाट कञ्चनपुरतर्फ लाग्यो ।
हुनत धनगढीबाट कञ्चनपुर जान अत्तरिया हुँदै सजिलो, छोटो पनि पर्छ । तर, मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडकको अवस्था र धुलोमाटोको दुर्गती देख्दा त्यहाँबाट जान मनै लागेन । हामीलाई पर्यटकिय स्थलको आनन्दसँगै मनोरञ्जन गर्नु थियो ।
हिजोका दिनहरुमा जताततै गहुँवाली देखिने त्यहाँ आजभोलि उखै–उखुको खेती देख्न पाईन्छ । धान, गहुँबाट भन्दा उखुमा राम्रो आम्दानी हुने र परिश्रम पनि खासै नलाग्नाले आफूहरु उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएको त्यहाँका कृषकहरु बताउँछन् ।
ताकी ६ लेन सडकको धुलोधुवाँले बिच बाटोमै निराश नबनाओस् । यस्तै मानसिकताले हामी डोके बजार हुँदै कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुर्नवासबाट हानियौं । धान, गहुँको लागि पकेट क्षेत्र मानिएको पुर्नवास क्षेत्र पछिल्लो समय उखु खेतीतर्फ आर्कषित भएको छ ।
डोकेबजारदेखि अमरबस्तीसम्म सडक कालोपत्रे गरेको भए पनि धनगढीको ६ लेन सडक भन्दा पुर्नवासको हुलाकी सडकको अवस्था पनि कम रहेन छ । ६ लेन सडकको धुलोधुवाँदेखि डरेर पुर्नवास देखि गएका हामीलाई फेरी त्यहिँ समस्या दोहोरियो । तर, पनि ६ लेन सडकको गाडीको चिच्चाहट भन्दा हामीलाई पुर्नवासको हुलाकी सडकमा एक्ला एक्लै यात्रा गर्न नै उचित लाग्यो ।
सडकमा धुलोधुवाँ भए पनि सडक वारीपारीको उखुखेती र तोरी फूलहरुले हाम्रो यात्रा सहज र सुगन्धित बनाई रहेका थिए । तोरीको फूलहरुलाई भमराले चुसिरहेका दृश्य मनमोहक थिए । हाम्रो यात्रा अगाडि लम्किदै थियो । करिब ४५ मिनेटपछि हामी कञ्चनपुरकै बेलौरी नगरपालिकमा पुग्यौं । भर्खर विकासको गतिमा लम्किएको बेलौरी बजार साँच्चीकै सुन्दर ठाउँमा छ । बजारको नजिकै घना जंगल छ । त्यहि जंगल हुँदै हामी अगाडि बढ्यौं ।
कलुवापुर बेलौरी सडक नाम गरेको लालझाडीको सडकमा बिगतमा सवारी दुर्घटना भएर धेरैले ज्यान पनि गुमाई सकेका रहेछन् । कतिपय ठाउँमा कालोपत्रे गरे जस्तै छ । तर कालोपत्रे गरेको २ वर्ष मै खाल्डाखुल्डी परेर रोड नाजुक अवस्थामा छ ।
वरपर ठूला बिभिन्न जातका रुखहरु, बिचमा सडक र सडकसँगै किनारामा जनावर छन् है सचेत रहनुहोस् भनेर लेखेका ठूला बोर्डहरु कुनै चलचित्रमा देखाइएका दृश्यहरु भन्दा कम थिएनन् । स्थानीयसँग केही कुराकानी र चिनजानसँगै हाम्रो टिम निरन्तर यात्रामा अगाडि बढि रहेको थियो । बेलौरीको सीमाना सकिएसँगै लालझाडी गाउँपालिका आइपुग्यो ।
कञ्चनपुरको विकट क्षेत्रमा पर्ने त्यो गाउँपालिकाका कतिपय स्थानियलाई त हामी कुन स्थानिय तहमा बस्छौं भन्ने पनि थाहा रहेन छ । कलुवापुर बेलौरी सडक नाम गरेको लालझाडीको सडकमा बिगतमा सवारी दुर्घटना भएर धेरैले ज्यान पनि गुमाई सकेका रहेछन् । कतिपय ठाउँमा कालोपत्रे गरे जस्तै छ । तर कालोपत्रे गरेको २ वर्ष मै खाल्डाखुल्डी परेर रोड नाजुक अवस्थामा छ । यसमा स्थानिय सरकारले त्यति प्राथामिकता नदिएको स्थानीय बताउँछन् ।
करिब डेढ घण्टापछि हामीले महेन्द्रराज मार्ग छोयौं । कलुवापुरबाट हाम्रो टिम दैजि हुँदै प्रसिद्ध शिद्ध शिबलिङ्गेश्वर धामतर्फ लाग्यौं । करिब १०÷१५ मिनेटपछि प्रसिद्ध शिद्ध शिबलिङ्गेश्वर धाममा पुग्यौं । दैजिदेखि करिब ८ किलोमिटर दूरीमा पर्ने उक्त धाम पछिल्लो समय सबैको ध्यान तान्न सफल भएको छ ।
चुरे क्षेत्रमा रहेको यो धाम करिब ४÷५ सय मिटरमा फैलिएको छ । वरपर घना जंगल, माथि चुरे क्षेत्र, बिचमा लिङ्गा, लिङ्गासँगै बगुन खोला । यो दृश्यले जो कोहिलाई पनि लोभ्याउँछ ।
कसैको विवाह गर्ने, बनभोज खाने त कसैको पूजाआरधना गर्ने केन्द्र यो धाम बनि रहेको छ । यो ठाउँमा भगवान् शिव पार्वती बसेको भन्ने किवदन्ती रहि आएको छ । भिरालो जमिनमा माटोको ढिस्काहरु परेका छन् । यसलाई लिङ्गा भन्ने गरिन्छ ।
धामका पुजारी बिरदत्त भट्टका अनुसार वि.सं २०२७ साल देखि पुजाआरधना गर्दै आएपनि यो धाम पछिल्ला वर्ष यता सबैको रोजाई बन्दै आएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको यो धाम करिब ४÷५ सय मिटरमा फैलिएको छ । वरपर घना जंगल, माथि चुरे क्षेत्र, बिचमा लिङ्गा, लिङ्गासँगै बगुन खोला । यो दृश्यले जो कोहिलाई पनि लोभ्याउँछ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको पहलमा अहिले साँघुरो सडकसँगै ग्रावेल छर्के पनि तिनै पत्थररुपी ग्रावेल गर्दा हाम्रो बाइकको स्ट्याण्ड भाँचिएको घटना नभुल्नु बनेको छ !
त्यहाँ पुग्ने सबैको मनको कामना पूरा हुने धार्मीक विश्वास छ । त्यसैले पनि धर्मालु भक्तजनहरु, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको भिड लाग्ने गर्छ लिङ्गामा । बेतकोट नगरपालिकाको वडा नं. ४ मा पर्ने यो धामको सडकको अवस्था भने बयान नगरिसक्नु छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको पहलमा अहिले साँघुरो सडकसँगै ग्रावेल छर्के पनि तिनै पत्थररुपी ग्रावेल गर्दा हाम्रो बाइकको स्ट्याण्ड भाँचिएको घटना नभुल्नु बनेको छ । शिद्ध शिबलिङ्गेश्वर धामको दर्शन तथा अवलोकन सकेर हामी बेतकोट ताल तर्फ प्रस्थान गर्यौं ।
लिङ्गाबाट १० मिनेटपछि हामी बेतकोट ताल पुग्यौं । दैजिदेखि करिव ७ किलोमिटर दुरीमा पर्ने बेतकोट ताल कञ्चनपुरको अर्को एक ऐतिहासिक पर्यटकिय गन्तब्य हो । बेतकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा पर्ने यो ताल उत्तर चुरे क्षेत्रको बिच भागमा छ ।
तालमा जाने सडक पनि अरु भन्दा कम छैन । त्यहाँ जानको लागि जंगलको बिच ग्रावेल सडक भएर जानुपर्छ । तालसँगै मन्दिर छ । मन्दिरमा पूजाआरधाना गरे मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । दैनिक सयौं पर्यटकहरु ताल अवलोकनका लागि जाने गर्दछन् ।
यी यस्ता ऐतिहासिक पर्यटकीय धरोहरहरुलाई अझ प्रख्यात र सबैको रोजाईमा पार्नको लागि सडक सञ्जालको सहजता तथा उपलब्धता आवश्यक छ ।
त्यहाँका एक स्थानीयका अनुसार घना तालको पानी मन्दिर भित्रबाट आउँछ । जंगलको बिच भागमा अवस्थित बेतकोट ताल हेर्दै मनमोहक छ । १ घण्टाको तयहाँको बसाइपछि तालको नजिकै रहेको मन्दिरमा दर्शन गर्दै हामी घर फक्र्यौं । यी यस्ता ऐतिहासिक पर्यटकीय धरोहरहरुलाई अझ प्रख्यात र सबैको रोजाईमा पार्नको लागि सडक सञ्जालको सहजता तथा उपलब्धता आवश्यक छ ।
हप्ता, महिनामा आउने बिदेशि पर्यटकहरु पनि दैनिक आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । यी ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण, सम्वद्धन र प्रचारप्रसार गर्नु हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो ।
ट्याग्स: Bedkot, kanchanpur, Linga